TOETRY NY ANDRO: Nivadika ho volon’andro ririnina ny eto afovoantanyLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarMALAGASY PEJY MALAGASYTOETRY NY ANDRO: Nivadika ho volon’andro ririnina ny eto afovoantany	TOETRY NY ANDRO: Nivadika ho volon’andro ririnina ny eto afovoantany	12/01/2017	Rédigé par:	Prisca RANJALAHY
Prisca RANJALAHY Loa-bava hatramin’ireo teknisianina eo amin’ny sehatry ny toetry ny andro eny Ampandrianomby. Herinandro izay no nolazain-dRandrianarison Rivo, lehiben’ny sampandraharahan’ny faminavinana ny mety ho toetry ny andro fa, nahafeno ny fepetra rehetra hamaritana azy ho andro ririnina ny toetry ny andro, eto Antananarivo.
“Mahery vaika ny fitsokan’ny alizay avy any atsinanana ka mahatonga ny mari-pana hiovaova, ary torak’izany ihany koa ny toetry ny andro. Mivadibadika toy ny andro ririnina izy araka izany”, hoy Randrianarison Rivo.
Mihantona tanteraka noho izany ny rotsak’orana ho an’ity faran’ny herinandro ity, raha ny vinan’ny mety ho toetry ny andro. Nilaza anefa ny avy eny Ampandrianomby fa noho ny faritra andro ratsy any amin’ny fari-dranomasina atsinanan’i Madagasikara dia mety hisy ihany ny orana madinika tandrifin-drahona amin’ny faritra sasany eto amin’ny Nosy.
Fantatra ary fa mety hahazo izany ny eto Antananarivo anio tolakandro, saingy voalaza fa zara raha handena ny tany izany rotsak’orana izany noho ny tsy fahampian’ny hamandoana eny an’habakabaka.
Tsy mbola ao anatin’ny tetikasan’ny Sampana mpamantatra ny toetry ny andro anefa ny hamorona orana ho an’ity herinandro ity. Mitaky fahefana ara-bola mantsy izany raha ny fanamarihan’ny tompon’andraikitra satria, sira manodidina ny 20 kilao isaky ny iray metatra tora-droa no ilain’ny fandatsahana orana. Ary ilàna fikarakarana manokana izany.
“Ny sira efa voatoto fampiasa ao an-dakozia no ampiasaina, saingy tsy maintsy totoina ho lasa vovoka manify izany alohan’ny hamafazana azy eny an’habakabaka”, araka ny fanamarihana voaray hatrany.
Partager la publication "TOETRY NY ANDRO: Nivadika ho volon’andro ririnina ny eto afovoantany"